ISIQITHI SEBEARDBOARD ISIQITHI (IINGCAMANGO ZOYILO) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Isiqithi seBeardboard Isiqithi (Iingcamango zoyilo)
Kweli phepha sabelana ngebhodi yebhodi yebhodi yezimilo yoyilo lwasekhitshini kubandakanya iindlela ezahlukeneyo.
Iibhodi zebhedi zifunyanwa kumakhaya elizwe kwaye bekudala kuyinkcukacha eyintandokazi yeendlela zoloyilo. Kwiikhikhini zangoku, iibhodi zebhedi zihlala zisetyenziselwa iikhabhathi umva kunye nodonga, ukunika ikhitshi labo iklasikhi, ukuziva okomdaka kweekhitshi zesitayile selizwe. Omnye ummandla wesicelo ofumene ukuthandwa kutshanje, ukwiziqithi zasekhitshini. Ukongeza i-beadboard kwiziqithi zasekhitshini kulula, kuhlahlo-lwabiwo mali, ukanti isinika indlela efanayo, efihlakeleyo yelizwe ikhitshi lakho emva kofakelo.
Kulo mfanekiso ungasentla kwesitayile se-paneling yeekhabhathi zasekhitshini zibonelela ngesimbo selizwe. Ngokongeza i-beadboard ethe nkqo kwisiqithi sekhitshi igqibezela uyilo.
utata womsebenzi womtshakazi
Uyifaka njani i-Beadboard
Yintoni i-Beadboard eyenziwe ngayo?
Ixabisa malini ibhodi yebhodi?
Ngaba upeyinta njani ibhodi yebhodi?
Imifanekiso yeeBadboard Kitchen Islands
Amanyathelo kunye neendlela zokufaka i-beadboard kwiziqithi zasekhitshini ziya kwahluka ngokuxhomekeka kubuso besicelo-ngaba sisiqithi esele sikhona? Ngaba kukho ipaneli okanye udini? njl. Kodwa ii-newbies ze-DIY, nalu ulwandiso olusisiseko lwamanyathelo ekufakweni kweebhodi:
Linganisa indawo yesicelo sakho kwisiqithi sekhitshi
Thenga ibhodi yebhodi yakho kwivenkile yomakhi wengingqi yakho - Ukuba kukho ukufuma okuphantsi kwindawo yakho kwaye awulindelanga ukuba umhlaba ube manzi kakhulu, sicebisa ukuba sisebenzise iipaneli zebhodi yebhodi ye-MDF. Iibhodi zebhodi ze-MDF zihlala zipeyintwe kwangaphambili, ke oko kuya kukugcinela ixesha kwisanti nasekwenzeni idyasi. Kwakhona kulula ukuzisika kwaye zinemiphetho egudileyo ngoko ke zizinto ezilula zabaqalayo.
Ukuthenga izinto zokubambelela kunye nezinto zokugqibezela - iinzipho ezingamanzi, ukugqiba iinzipho, isandpaper, i-caulk, ukubumba (iibhodi zesiseko, ii-cornerstrips, njl njl, ukuba ziyafuneka)
Sika iibhodi zakho kubungakanani. Qaphela ukuba iiphaneli ezi-1-1 / 2 ezibanzi zihlala zilula ukwenza i-miter kwikona kwaye zihlala zihambelana nokubumba okukhoyo kunye nezakhelo.
Qinisekisa ukuba umphezulu wesicelo ucocekile-umphezulu wesanti njengoko kufuneka, ngakumbi ukuba unepeyinti esele ikho
Yongeza isixa esivulekileyo sezikhonkwane ezingamanzi ngasemva kweebhodi zamabhodi ezisikiweyo ze-MDF kwaye ufake umphezulu wesiqithi sekhitshi
Sebenzisa ukugqiba iinzipho ukuzikhusela endaweni yazo. Qiniseka ukuba iintloko zezikhonkwane zifakwe kwiiphaneli ze-MDF ngokufanelekileyo.
Caulk imiphetho / iikona eziveziweyo kunye nemingxunya yezipikili zokugqibezela.
Isanti kunye nepeyinti ukugqiba.
Xa usiya kwivenkile yomakhi, unokumangaliswa zizinto ezahlukeneyo iipaneli zebadibhodi ezingenayo. iikhabhathi zekhitshi lebhedi zenziwe ngomthi oqinileyo, kodwa ngoku zininzi iindlela onokukhetha kuzo. Kwiziqithi zasekhitshini, kunokuthengwa iipaneli zebadibhodi ezinokubethelelwa kubume njengeprojekthi ye-DIY. Eyona nto ibalulekileyo yokongeza ibhodi ebhodini kwisiqithi sekhitshi ixhomekeke kuhlahlo-lwabiwo mali, ukugqiba ukuthanda kunye nendawo yesicelo.
Iibhodi zebhodi eqinileyo zedola zinokubiza naphina ukusuka kwi- $ 1 ngonyawo wesikwere, ukuya phezulu, kuxhomekeke kumthi wokhuni kunye nasekugqibeni. Iipaneli zebhodi yebhodi eqinileyo inokuthengwa ingagqitywanga, inyangwe kwangaphambili (ngeentubi kunye nokuxhathisa ukufuma), ukulungele ukupeyinta, ukupeyintwa kwangaphambili okanye ukugqitywa kwangaphambili. Kuxhomekeke kwinkcazo yakho, iindleko ngeenyawo zenyawo zinokunyuka. Esi sisixhobo sokhetho ukuba ufuna imibala yendalo yemithi kunye nembonakalo ephezulu. Ukhuni lwendalo luye lwanike ukunika ukuthungwa okungaphezulu kunye nokufudumala kwindawo.
Ukuba uziva ukuba ukhuni oluqinileyo lubiza kakhulu kwaye lusebenza ngamandla, enye into eyaziwayo zibhodi yeebhodi ze-MDF. Bahlala bexabisa kuphela phakathi kwe- $ 0.50 ukuya kwi-0.75 yeenyawo ngonyawo wesikwere, kwaye beza bekulungele ukupeyinta okanye ukupeyintwa kwangaphambili. Ezi zinto zilungele i-newbie DIY-ers, kunye nepeyinti yebhodi yepeyinti.
Ukuba awuyipeyinti ibhodi yakho yebhodi kwaye ungathanda enye into enjengomthi, cinga ukusebenzisa iipaneli zeebhondi zeply-bead, ezisisiseko seepaneli zebhodi yebhodi yebhodi. Inika izinto ezifana nemithi ngexabiso eliphantsi, ukuqala nge-0.50 yeenyawo zenyawo okanye i-16 yeedola ngeepaneli ze-4 'x 8'.
Kwiindawo ezinomswakama okanye ukufuma okuphezulu, ivinyl okanye i-PVC beadboards zihlala zisetyenziswa. Zilula kwaye kulula ukuzicoca nokuzigcina, nangona kunjalo, kulungile ukuba uqwalasele ukuba ithambekele kumonakalo nakwimfazwe. Ukungena kwiipaneli zebhodi yebhodi ye-beadboard kuhlala kubiza malunga ne- $ 0.75 ukuya kwi-2 yeenyawo zenyawo nganye.
Esinye isixhobo esifanelekileyo kwiindawo ezifumileyo kunye nokusetyenziswa kwangaphandle ziibhodi zentsimbi zesamente. Le nto inokuqina okungcono kunye nokumelana nemozulu kune-vinyl / i-PVC, kwaye yeyona ndlela iyi-eco-friendly kwi-PVC. Iibhodi zeFiber Cement zobuhlalu ezivela kwiimpawu ezaziwayo zinokuxabisa i-7.45 yeedola ukuya kuthi ga kwi-12.35 yeedola ngenyawo lesikwere.
Ipeyinti efanelekileyo ichongiwe ngohlobo lwezinto zebadibhodi ozisebenzisayo. Iibhodi ze-MDF esele zenziwe kwangaphambili kunye neebhodi zeFiber Cement zihlala zilula ukupeyinta / ukusebenza nazo. Ngezinye izinto, ziyafumaneka kugqityiwe / kupeyintiwe. Kodwa ukuba ufuna ukuyipeyinta ngokwakho, nxibelelana nengcali yezixhobo ngezona ngcebiso zipeyinti zezinto zakho ezithile.
Ukuba unayo ikhabethe ekhoyo ekhitshini lakho, unokongeza nje iipaneli zebadibhodi kwicala elingaphambili lesiqithi sasekhitshini njengalo mzekelo ungasentla. Ngezona ziphumo ziqinisekileyo qiniseka ukuba umsebenzi wepeyinti uwudibanisa kakuhle neekhabhathi ezikhoyo.
Eminye imiba ekufuneka uyiqwalasele:
Ngaphandle kweendleko zezinto, enye into ekufuneka uyiqwalasele iya kuba yindleko yokufaka. Kuxhomekeka kwinto yakho, iindleko zokufaka ziya kwahluka. Ukuba ufuna ukugqiba okanye ukupeyinta ibhodi yakho yebhodi, ikwayenye indleko yabasebenzi yokuzibandakanya, ke gcina oko engqondweni xa ukhetha izinto zakho zebadibhodi- ibhodi esele igqityiwe inokubiza ngaphezulu kunyawo lwesikwere, kodwa inokukugcina kunye nemali ukuba ufuna ukugqiba iindleko. Ukufakwa kwebhodi yebhodi kuhlala kubiza i $ 4- $ 6 ngonyawo wesikwere.
Apha ngezantsi kukho iziqithi zasekhitshini ezineepaneli zebhedi yebhodi efakelwe ukukhuthazwa kwakho:
Iipaneli zebhodi yebhodi emxinwa esetyenziswe kule nto imile ngokwama-l Uyilo lwekhitshi lelizwe Isiqithi sinika ubume obungacacanga kumphezulu, sincede sigqibe esi silula kunye nokukhangeleka okuthambileyo kwesitayile sasekhitshini.
imigca evela inkosazana umtshakazi
Iiphaneli zebhedi yebhodi esetyenzisiweyo esisiqithi esikhulu sekhitshi yongeza iindidi zemibhalo kwindawo. Ipateni ethe nkqo yahluke mpela kwiitayile zobuxoki zesplash zetena.
Oku ikhitshi elineekhabhathi ezimhlophe kwaye isiqithi sinxitywe iiphaneli zebhedi, sisinika ubume obume phakathi komphezulu wekhabhathi zekhawuntari. Ibhodi yebhodi, kunye nezinye iinkcukacha ezincinci ekhitshini ezinje ngokutsala, ukukhetha ifenitshala kunye nezixhobo, ngokuqinisekileyo kugqiba isibheno selizwe sendawo.
Umhlophe ngowona mbala uthandwayo osetyenziselwa iibhodi zeebhondi, kodwa zikwahluka ngemibala kwaye zigqiba. Lo mzekelo ubonisa i-Mahogany beadboard eqinile phantsi kwesiqithi esiqinileyo saseMahogany. Ukugqitywa kwendalo kweMahogany kwiziqithi zasekhitshini kuyenza ime ngaphandle ngokuchasene nekhabhathi emhlophe ekhitshini.
Ukusetyenziswa kokukhanya okuluhlaza okuluhlaza kwisiqithi sebhedi sekhitshi yesiqithi kunika imvakalelo entsha nengafaniyo, isenza ukuba sime ngokufihlakeleyo kuyilo lwekhitshi. Kuyinto entle yokuhlaziya ukuthatha inkangeleko yeklasikhi!
Isicelo esikhethekileyo, lo mzekelo usebenzisa iipaneli zendalo ze-oak beadboard kwisiqithi sayo sasekhitshini, kodwa endaweni yesicelo esiqhelekileyo esime nkqo okanye esithe tyaba, sakha ipateni ye-chevron, siyinike uluvo lwangoku kwaye silingane nokubonakala kwe-eclectic ikhitshi.
Iibhodi zentsimbi iziqithi ze-ktichen zikwancedisa iikhabhathi zasekhitshini zaseFrance. Iibhodi ezimxinwa ezisetyenziswe kulo mzekelo zinceda ukongeza ukuphakama okubonakalayo kwisithuba, kwaye zongeza ngakumbi ukuthungwa kunye nephethini.
uza kuba ngumolokazana wam?
Oku kuncinci Uyilo lwekhitshi lendlu yasefama ine siqithi esineenkcukacha zekholamu ezijijekileyo kunye neepaneli zebadibhodi ezenza indawo ephambili embindini kweli khitshi lincinci.
Iipaneli zebhodi yebhodi yebhodi emnyama idityaniswa ngaphandle komthungo kunye nezinye iikhabhathi ezimnyama ze-oki zale khitshi. Ubungakanani bomgangatho wegrey, imiphezulu yeetafile kunye neendonga zinceda ithoni phantsi kwetoni emnyama yokhuni kunye nokwenza ukujonga okulinganayo.
Iibhodi zeebhondi nazo zinokuba ziimpawu ezintle ze-rustic kwiikhikhini zesitayela sangoku. Iiphaneli zebhedi emhlophe esetyenziswe kwisiqithi sekhitshi kulo mzekelo inceda ukugqibezela ubuqili be-rustic vibe uyilo lwekhitshi oluzama ukufezekisa.
Le khitshi isitayile esihle ngokuqinisekileyo ikhangeleka iyodwa, kodwa ngokongezwa kwesiqithi sekhitshi esizimeleyo, indawo ekugxilwe kuyo yongezwa kwindawo. Inkqubo ye- iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini ezinemiphezulu yeetafile zegranite thelekisa kakuhle nesiqithi esingwevu. Esi siqithi sasekhitshini sineenkcukacha zebhodibhodi, iibakaki zentsimbi eziyintsonkothileyo kunye neekolonettes ezizalisekisa isitayile siphela kunye nomxholo wekhitshi, kodwa ikwanakho nokuthungwa okungaphezulu okukubeka ecaleni, okwenza ukuba ibe sisiqwenga esihle.
ikowuti evuyisayo yesikhumbuzo sabahlobo
utshata njani ny
imifanekiso yelokhwe yomtshato elwandle
izimvo zomtshato ezivela kumyeni ukuya kumtshakazi
iibhedi zebhedi yokuyila
izibhambathiso zomtshato ekuguleni nasempilweni